AMISOM: Maalin weliba 10 illaa 40 Askari oo dhaawacyadooda wax looga qaban waayay Soomaaliya ayaan Dibadda u dirnaa.(Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
AMISOM: Maalin weliba 10 illaa 40 Askari oo dhaawacyadooda wax looga qaban waayay Soomaaliya ayaan Dibadda u dirnaa.(Dhagayso)
On Dec 6, 2018 224 0
Ciidamada AMISOM ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ayaa dhawaan baahiyay warbixin muuqaal ah oo ay uga sheekeynayaan qeybta caafimaadka ee AMISOM Iyo culeesyada ku hor gudban, maadaama uu sii kordhay khasaaraha ku gaaraya howlgallada ay kala kulmayaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Warbixinta oo ciwaan looga dhigay “ Daryeelka caafimaad ee ciidamada ku waxyeelloobay dagaallada” ayaa lagu soo gudbiyay dhakhaatiir kala duwan ee ciidamada Shisheeyaha ku wehlineysa duulaankooda, kuwaas oo ka sheekeynaya xaaladda caafimaad ee ciidamada, iyo caqabadaha heysta.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in tirada ciidamada Shisheeyaha sanadkii 2007-da ay ahaayeen 1600 oo askari, haseyeeshee 2016-kii ay gaareen 22,000, taas oo ka dhigan in mar kasta oo ay kororto tirada ciidamada ay sii kordheyso waxyeellada kala duwan eek u gaareysa fagaarayaasha dagaalka.
Dr Robert oo ah maamulaha xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegaya in xafiiskooda uu Muqdisho ka furay xarunta koowaad ee lagu dabiibo ciidamada Shisheeyaha, waxaana maamula Yugaandha, halka xarunta labaadna ay ka hirgeliyeen magaalada Dhooblay waxaana gacanta ku haya ciidamada Kenya.
Intan kuma koobna oo keliya xarumaha caafimaad ee Qaramada Midoobay ka hirgelisay Soomaaliya, si ciidamada Shisheeyaha uga taageerto dhanka caafimaadka, waxay xarun caafimaad oo sadexaad ka furtay magaalada Baydhabo, waxaana maamula ciidamada Itoobiya, halka xarunta afraad oo ay maamulaan isla ciidamada Itoobiya ay ka furantahay magaalada Baladweyn.
Isbitaal shanad oo lagu daweeyo dhaawacyada ciidamada Shisheeyahah iyo bukaanadooda ayaa ka furan magaalada Jowhar, waxaana gacanta ku haya ciidamada Burundia, xarunta ugu dambeysana waxay ka furantahay magaalada Kismaayo, waxaana maamula dhakhaatiir Kenyaati ah.
Xarumahan caafimaad ee laga hirgeliyay goobaha aan soo sheegnay, waxay Qaramada midoobay sheegeysaa in lagu saleeyay mowqiga Juqraafi ee ay ku yaalaan magaalooyinkaas, iyo isbedellada siyaasadeed ee imaan kara.
Amado Camara oo ah madaxa caafimaadka xafiiska UNOSOS ayaa mar uu ka hadlayay howlaha ay qabanayaan xarumahan caafimaad wuxuu sheegay iney tahay in daryeel caafimaad loogu sameeyo shaqaalaha howlgalka AMISOM, iyo in taageero caafimaad logou fidiyo ciidamada Shisheeyaha ee ay waxyeelladu kasoo gaareyso dagaallada.
Camara wuxuu meesha ka saaray in wax adeeg caafimaad ah ay siiyaan ciidamada dowladda federaalka, wuxuuna sheegay ineysan waxba siinin malleeshiyaadka soomaalida, marka laga reebo qaarkood oo howlgallada ku wehliya ciidamada Shisheeyaha.
Halkan ka dhagayso Warbixin aan ku eegeyno Warbixinta kasoo baxday waaxda Caafimaadka ee AMISOM.